रोसीका हजार छाल | samakalinsahitya.com
विचित्र हुन्छ कहिलेकाँही । यदाकदा नसोचेकै कुराको जोरजाम हुन्छ । हठात्मा घुमन्ते भइन्छ, जोहो न सोहो । मेलोमेसोविनै डुलन्ते हुन पुगिन्छ । अपुताली लाभ भनेकै यै होला—अचम्मैले घुमघाम गर्न पुगिन्छ ।
धेरै अघिदेखि त्यतातिर जान पाए हुन्थ्यो भनेर मनले बुरुकबुरुक गरिरहेको बेलामा जोशीको खबरले खरबारीमा आगो लाएजस्तो भइहाल्यो । सोचीसम्झनतिर समय लगाइनँ । घरायसी झ्याउलातिर अल्मलिनँ ।
अनि म कुम्लो बोकेर झटारिएथेँ त्यता ।
‘बिस्तारै जाऔँ । घुमीघुमी पुगौँ !’
‘कुनै समय दशौँ जनालाई जङ्गली तन्नेरीका तुजुगले एकै चिहान पारेथे !’
हामीसँगै चिया सुर्काइरहेका केदार आचार्यले सुनाए द्वन्द्वका पीरा कथा । उनीसँग घर व्यवहारका कुरा भए धेरैधेरै ।
एक माउको दूधबाट व्यवसाय सुरु गरेर अहिले करोडौँको धन यसमै आर्जन गरिरहेका आचार्यले भने—‘दुःख अहिले नि छ । त्यो बेला, अंश पाइयो सगोलको घर । भाग प¥यो ठूलो खँड्कुलो । अब त्यसमा कसरी पकाउनु, लोग्नेस्वास्नीलाई मात्र ?’
कहालिलाग्दो जीवनका खुइ्यय सुनिरहेछु ।
अनि हामी सडकसामु ठडिएका उनका घर हेर्दै ओ¥हालो लागेथ्यौँ ।
खुल्ला आकाशमुनि रमाइरहेथ्यो भकुन्डेबेसी । वीपी राजमार्ग हुइँकिरहेथ्यो रोसी भेट्न तलतल । फाँट, खोँच, खरिखुन्नै डाँडाहरु र चारै दिशा ठडिएका थुम्काहरुले मन तानिरहेथे, आँखा लोभिइरहेथे र खुट्टा जमजमाइरहेथे ।
चौकीडाँडा, कटुन्जेपछि थकाइ मा¥यौँ लासकोटमा ।
सडकछेउ भेटिएका सार्कीमान तामाङसँग केही शब्दका अर्थ सिकेँ मैले ।
‘मामा अर्थात् आस्याङ । माइजू अर्थात् आङी । म्हेन्दो भनेको पूmल । रो भनेको साथी ।’
सार्कीमानले सिकाएका अरु शब्द टिप्न सकिनँ ।
रोसीको कलकलले सङ्लियो मन । साना, रहरलाग्दा छाल थिए रोसीभरि । कञ्चन खोलो पहाडी पिँध भएर तराईतिर वेगवान् थियो एकोहोरो ।
चारसेफाँट नाँघेर पुग्यौँ गिम्दी ।
दुबैतिर थिए एकोहोरो उराठलाग्दा डाँडाहरु । पातला बस्ती परेलीसँग ठोक्किएर बेपत्तिन्थे । डाँडा र चेपको चुम्बन थियो निकै चर्को । आकाशको गिज्ज्याइजस्तो, धर्तीको लोप्पा खुवाइजस्तो—वरपरका थुम्कामा एक बुट्यान देखिन्न्थ्यो । कुनै बिरुवाको एकथोपा छाँयासम्म सल्बलाएको थिएन । अँह, थिएन ।
‘लुकेर बसेकाहरुले लैनो–लैनो भनेपछि ढुकेर बसेकाले लुट्थे रे !’
पुराना हैरानीका कुरा सुन्दै त्यै बाटो गइरहेछौँ हामी ।
घामले दिनभरि फैलाएका पखेटा खुम्चाएछ सरक्क । खोँचमा थुप्रिएको अँध्यारो बामे सर्दै बाहिरिन थाल्यो सुस्तरी……सुस्तरी ।
मैले वरिपरिका सुक्खा डाँडाहरु हेरेँ ।
‘यतिखेर क्यै नभए नि अलिकपछि सत्ती बयरका घारी उम्रिन्छन् यी पाखामा !’
सार्कीमानले अघि भनेको सम्झेँ ।
‘भइहाल्छ नि !’
हामी पिन्थलीदेखि चिउरीबाससम्म लम्क्यौँ बिस्तारै । बेलुका ज्यान बिसाउन मात्र पुग्नु थियो । क्यै थिएन अरु बित्तो ।
उनी आफ्ना ‘रो’ हरुसँग भन्दै थिए—‘छोराहरुलाई सम्झाएर आएको बेँसीबाट । अर्काको खेतमा धान हरियो हुँदा आफ्नो पनि खेत हरियै हुनुपर्छ । अर्काको घरमा गाई हुँदा आफ्नो घरमा पनि घिउ नटुटेकै जाती । यो त गाउँको परम्परा हो । यो थिती रहिरहे, दुःख हुँदैन । यो विधि नमान्दा दुःखले घर घेर्छ !’
झमक्क साँझमा पुग्यौँ मङ्गलटार ।
आवाजको उपचार गरेँ मैले । साँझ, मध्य रात, झिसमिसे बिहान, मध्य दिन—सबै खाले समयमा रोसी हेरेँ, पढेँ र उसका गतिपति निहालेँ । परिवर्तन, दर्शन र ज्ञानका तहतहमा उभ्याउन सकेँ आपूmलाई ।
‘अनि यो तोरी बेची तेल किने हुन्न र ?’
यतातिर तामाङहरुको बसोबास छ बढ्ता । यो सरल र हार्दिक जातिलाई राजनीतिका पुङमाङे कुराले खुब रगत तताएको रै’छ आजभोलि । गाउँका सरस ओठमा पनि घोकाइएका र जबरजस्ती लादिएका शब्दले रामै्र ठाउँ पाएको बेस्सरी पाइरहेको थिएँ म । निकै खल्बलिएछ समाज त ।
‘यी चुली छेउछाउको जनजीवन, कृषि, व्यवसाय र संस्कृति विचित्र–विचित्रको छ !’
उनले तीसवर्षदेखि पढ्न नसकेको सभ्यतालाई बा¥हचौध घन्टामा म कसरी पढूँला !
उकालैमा थियो विन्ध्यावासिनी प्राथमिक विध्यालय । चौरमा केही कराँते, जुडो खेलिरहेका तरुनातरुनी इँटा, ढुङ्गा फोर्दै जवानी बलियो पारिरहेका थिए । उता तल रोसी तीरका बस्तीमा हाँसो व्यायाम गरेर सिङ्गै बिहान पारिरहेथे खलबल । जेहोस्, तन र मन सबै स्वस्थ पार्न जुटिरहेथे । गाउँमा नयाँ गतिशीलता भेटेँ मैले ।
साँझमा फेरि बरालिएँ रोसीछेउका खेततिर ।
भोलिपल्ट लाक्पाल गाउँतिर एकाबिहानै उक्ल्यौँ पदमराज र म । ढुङ्गेनी उकालोले पसिनै छुटायो । पूर्वतिर वेगिइरहेको रोसीको सुन्दरता टाँसिन्थ्यो आँखामा । उत्तरतिरका बाँदर चिप्लिने भीर थिए । तिनै भीरमा नि मान्छेका घर हजारौँ वर्षदेखि रहिरहेकै देखिन्थे । सयौँ वर्षदेखि जीवनले दाँती र मुङ्ग्री गरिरहेथ्यो यो आपट्टे भीरमा ।
‘अझ, अल्छीले घर गरेको छ यता । धेरै बस्तीमा साग रोपिन्न, फलपूmल भेटिन्न !’
‘कोदो, फापर, राजमा, बोडी उमा¥यो । आलु उमार्न चैँ बिर्सदैँनन् । हो, गाईबस्तु भने मज्जाले पाल्छन् !’
‘यसको के काम, वाला ?’
‘धामीले भन्या, यसको धुप हाले मेरी स्वास्नीले बच्चा सजिलै पाउँछे रे !’
‘आस्याङ, खेत खन्दै ?’
‘के फल्छ र ? माटाका डल्ला चिम्टोदै, खाँदै !’
सुनकोसी र रोसीको माझमा अभिशप्त जीवन बाँचिरहेको तिमाल थुम्का पनि हेरँे । सँधैको काकाकुल जीवन बाँच्न सकिन्छ कसरी ? तिमाल डाँडामा पानीका लागि घन्टौँ समय खर्चने आइमाईहरु पनि भेटेँ ।
कुरो रहेछ यस्तो—
पानीको धेरै दुःख हुने तिमालमा चाँडचाँडै कुँच्चिदा रहेछन् । अनि आफ्ना गोडधुवाका सामान मास्दै आइमाईहरुले खरिद गर्दा रहेछन् गाग्री । यी वृद्घासँग सबै सिद्घियो रे—माइतीले दिएका गोडधुवाका सामानहरु !
आधा कमेरो र आधा रातमाटेले लिपेर सजाइएका घर हेर्दै मनको घर हेर्दै मनको चकमन्नता भत्काउँथेँ म । घर अगिल्तिरका आँगनमा भएका मकैका सुली हेर्दै आँखामा सन्तोष भर्थें म ।
किन यी डाँडाहरुमा रुख नरोपिएको होला ? किन नाङ्गा डाँडालाई हामी मृत्योन्मुख बनाइरहेछौँ ? किन यी पाखाहरु झन् उराठलाग्दा बनाइरहेछौँ ? मैले अरुसँग सोध्ने साहस गरिनँ । केवल प्रश्न थियो आँपैmमा ।
घामले आफ्नो शक्ति लगाएर यी डाँडाहरुका चट्टान बालुवा बनाइरहेथ्यो, बालुवालाई पर–पर उडाइरहेथ्यो अनि जीवनमा सङ्कटको रातो बत्ती बलिरहेथ्यो । धुलिसात्…….धुलाम्मे…….धुलो…….हुँदै थियो जीवन !
‘चिया भुटेको हो कि, रो ?’
इतिहास, समय र देशमा यी ठाउँले आफुलाई उभ्याएका छन् कतैकतै । धर्तीका यी फग्लेटाले नेपाली मनका कुनै कुनाकाप्चामा आपूmलाई दगुराएका छन् । शासनका कुनै आवाजमा आफुलाई टेकाएका छन् यी ठाउँहरुले ।